December 2, 2021 – Facebook Khabar
करिब ५० अंक घट्दै नेप्से २६०० विन्दुभन्दा तल, दुई कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से करिब ५० अंक घटेर २६०० विन्दुभन्दा तल झरेको छ। यस दिन नेप्से ४९.०४ अंक घटेर २५८४.६१ विन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ९.४६ अंक [ … ]
जीवन विकास जस्तै सर्किट लाग्ने ४ लघुवित्त कम्पनीहरु को आईपीओ आउँदै, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका ५ मध्ये ४ लघुवित्त कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका नेष्डो समृद्ध [ … ]
नेपालको पूँजी बजारमा नियामककै गिद्दे दृष्टि किन ?
पछिल्लो करिब १८ महिनाको अवधिमा नेपालको पूँजी बजारले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यो अवधिमा नेप्से परिसूचक सर्वाधिक उच्च बिन्दु अर्थात ३१९९ को बिन्दुमा पुग्नुको साथै दैनिक कारोबार [ … ]
लगानीकर्ताको रोजाइमा परेका जीवन र महिला लघुवित्तमा अब्बल हुने प्रतिस्पर्धा, लाभांश क्षमता कति?
काठमाडौं- लगानीकर्ताको सर्वाधिक रोजाइमा परेका दुई लघुवित्त जीवन विकास र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये जीवन विकासले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी छ। महिला लघुवित्तले ५० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ। संस्थाले [ … ]
facebook - December 2, 2021 December 2, 2021
मंसिर १६ गते, बिहीबार, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (MLBSL) को शेयरमूल्य समायोजन भएको छ। साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ लघुवित्तले बुकक्लोज गरेसँगै नेप्सेले [ … ]
बुद्धभूमि हाइड्रोपावरका सेयरधनीले सुरूमै २५२० रूपैयाँ कमाउने, कहिले होला कारोबार?
काठमाडौं– बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरका प्राथमिक सेयरधनीहरुले पहिलो दिनमै २ हजार ५ सय २० रुपैयाँ कमाउने देखिएको छ। कम्पनीले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम ८४.०५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २५२.१५ रुपैयाँको रेञ्ज [ … ]
बिनोद चौधरीले एनबी बैंकको ४०.८९ प्रतिशत सेयर खरिद गर्दै, पछि हट्यो दुगड समूह
काठमाडौं– नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जरको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। जसको लागि नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) मा रहेको बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको सेयर खरिदमा चासो दिएका उद्योगपति बिनोद चौधरीले [ … ]
छुट्ला है! एउटा बैंकमा लगानीकाे ठूलाे अवसर आउँदैछ, १ अर्ब २० कराेडकाे कित्ता आउँदै
सिभिल बैंक लिमिटेडले वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको छ। बैंकले मंसिर २४ गतेदेखि ‘सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८८’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो। सो ऋणपत्रको अवधि १० [ … ]
काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारमा अहिले झन्डै ४२ लाख डिम्याट छन्। भर्खरै आईपीओ निष्कासन गरेको तेह्रथुम पावरमा झन्डै २४ लाख लगानीकर्ताले आवेदन दिए। तीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ता विद्यार्थी छन्। इन्टरनेटको पहुँचका [ … ]